IFTA နှင့်အခြားရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအုပ်စုများသည်အွန်လိုင်းခိုးကူးမှုကိုရပ်တန့်ရန်အစိုးရ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုရှာဖွေကြသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » IFTA ပြီးတော့အခြား Movie, စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့များအွန်လိုင်းပင်လယ်ဓားပြရပ်ဆိုင်းလိုက်ခုနှစ်တွင်အစိုးရကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးကိုရှာ
ဤသည်နေ့ရက်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ပေါင်းစည်းအသက်အရွယ်မှာတော့ခိုးကူးအရင်ကထက်ပိုပြီးအဓိကလျှင်မအများကြီးပိုကြီးတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့တရားမဝင်မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ပစ္စည်းဖြန့်ဝေသူကိုမဆိုတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များကိုရင်ဆိုင်ရသင့်ပါတယ်။ နေဆဲခိုးကူးရှည်ထွက်ထိုအရပ်၌များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများကြောင်းလမ်းမခံစားရဘူး။ ဘေးဖယ်ထိုကဲ့သို့သောအတု, အင်တာနက်ပင်လယ်ဓားပြ, အဆုံးအသုံးပြုသူခိုးကူး client-server ကိုသုံးရင်, နဲ့ Hard-disk ကိုတင်အဖြစ်ပင်လယ်ဓားပြများ၏ပိုပြီးလေ့ဆက်စပ်ပုံစံများကနေ, အွန်လိုင်းခိုးကူးမှု၏တစ်ဦးထက်ပိုသောမျက်နှာစာနည်းလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးကြီးထွားလာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လာသည်, အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအဘို့ တူရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းအုပ်စုများ IFTA နှင့် MPAA.
အွန်လိုင်းခိုးကူးမှု၏ဤသစ်ကိုပုံစံပင်လယ်ဓားပြများ၏ပုံစံကိုကြွလာတော်မူ IPTV န်ဆောင်မှုများ, ဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ဓားပြ streaming များန်ဆောင်မှု။ paid အခမဲ့ပင်လယ်ဓားပြက်ဘ်ဆိုက်များပါဝင်သည်ရသောကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံအတွက်လာပင်လယ်ဓားပြ streaming န်ဆောင်မှုများ, IPTV subscriptions ကို။ တရားမဝင် 1,000 ကျော် IPTV ကမ္ဘာတဝှမ်းလည်ပတ်ကြောင်းန်ဆောင်မှုများ, ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ, သူတို့သည်အထူးသဖြင့်ဝယ်လိုအားပေါ်တွင်န်ဆောင်မှုအဖြစ်ခိုးကူးအကြောင်းအရာတစ်ဦးချင်းစီကိုအပိုင်းပိုင်းဝင်ရောက်ဖို့ configured ခဲ့ကြကြောင်းဆက်ကပ်အပ်နှံ Web Portal, Third-party application များနှင့်ပင်လယ်ဓားပြ devices များမှတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အတူ IPTV streaming များ, အခြားဆိုက်များကိုချိတ်ဆက်ထိုကဲ့သို့သော torrent က်ဘ်ဆိုက်များ, cyberlockers အဖြစ်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစားများ, အဖြစ် streaming များ devices များနှင့် applications များရှိနေဆဲပင်အွန်လိုင်းခိုးကူးမှု၏ထွန်းသစ်စခြိမ်းခြောက်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာဖို့ဆက်လက်။
အဘယ်အရာကိုအွန်လိုင်းပင်လယ်ဓားပြတိုက်ဖျက်ရေးစေရန် Done ခံရသလော
အလွန်အမင်းအဆင့်မြင့်ပင်လယ်ဓားပြ၏ဤအသစ်သောပုံစံကိုတစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုယူကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုချွတ်ရောင်းဖို့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်မရှိလေးစားမှုအနည်းငယ်သာမူပိုင်ခွင့်ပစ္စည်းပြပွဲ၏ကျူးလွန်သူကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာ, ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများကိုဦးတည်အလုပ်လုပ်ခဲ့နေပါသည်အဖြေတစ်ခုတရားဝင်အွန်လိုင်းခိုးကူးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးပမ်းအတွက်စုဝေးကြပြီတ။ ထိုကဲ့သို့သော IFTA, MPAA, အဖြစ်အများစုမှာမကြာသေးမီက, စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများ CreativeFutureနှင့် SAG-AFTRA စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမေရိကန်ဦးစီးဌာနနှင့်အတူ anti-ခိုးကူးဆန္ဒစာရင်းတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီစာရင်း၏ကမ်ဘာဦးကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ပစ္စည်းများ၏တရားမဝင်ဖြန့်ဖြူးရည်မှတ်အရေးပါသောကိစ္စရပ်များအပေါ်အများပြည်သူ input ကိုရှာဖွေခဲ့ပါသည်ရှိရာတောင်းဆိုချက်တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ရောက်လာတယ်။
anti-ပင်လယ်ဓားပြ Wish List ကိုမျှော်လင့်
ခိုးကူးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ပုံအပေါ်လူထု input ကို၏ရလဒ်အဖြစ်အမေရိကန်အစိုးရအပါအဝင်အချို့သောလုပ်ရပ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမှတစ်ဆင့်ခိုးကူးတိုက်ခိုက်နေအပေါ်မှတဆင့်နောက်တော်သို့လိုက်သေချာအောင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူပဋိသန္ဓေယူသော Anti-ခိုးကူးဆန္ဒစာရင်း လာ. :
ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များခုနှစ်တွင် သာ. ကောင်း၏မူပိုင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစတင်အာဏာတည် Installing
အမေရိကန်အစိုးရကျနော်တို့မှာအများကြီးထိရောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိရာအထင်ရှားဆုံးဧရိယာကိုပိုမိုထိရောက်သောပြစ်မှုဆိုင်ရာဘက်တော်သားများ၏စတင်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အတိတ်ကာလများတွင်အုပ်စုများတရားရေးဦးစီးဌာန (DoJ) အားအကြိမ်ကြိမ်ရည်ညွှန်းလုပ်, ဤခိုးကူး streaming များန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့သည်, သူတို့ကအောက်ပါဖြစ်ပျက်ကြောင်းတရားဝင်စားသုံးမှု၏အဟန့်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှစ်ဦးစလုံးပုံတူပွားနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဘယ်လောက် Megaupload ဥပဒေရေးရာကိစ္စ ဘယ်မှာအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီ Megaupload, LTD ရဲ့တည်ထောင်သူ 2012 ၏, ကင်မ် Dotcomဥပဒေရေးရာအကြောင်းအရာသည်အသုံးပြုသူများမှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့တန်ဖိုးရှိ gigabytes ၏အရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုများ၏စွဲချက်အပေါ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါခိုးကူးဂေဟစနစ်ရဲ့ရှုပ်ထွေးအကောင်းဆုံးခြောဘက်တော်သားများ၏ concept ကိုပိုပြီးခက်ခဲစေသည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်စဉ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ရန်အများအပြားဘယ်သူကို၏ကစားသမားများနှင့်ကြားခံ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း, နေဖြင့်ရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများကိုပိုမိုကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များအဘို့အလိုခငျြသောကွောငျ့အစိုးရကပင်လယ်ဓားပြတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ပိုမိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန်အဘို့, သူတို့ကအစိုးရတတိယ၏အလားအလာအန္တရာယ်အပေါ်ဗဟိုပြုတဲ့အာရုံနှင့်အတူ၎င်း၏ဘက်တော်သားမော်ဒယ်မွမ်းမံတောင်းခံအတူခေါ်ပြီတော့ -party ကြားခံထိုကဲ့သို့သောဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်, hosting မတ်မတ်, ISP များသည်, ရှာအင်ဂျင်များ, နှင့်အခြားမလိုလားအပ်သောကစားသမားအဖြစ်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်လုံလောက်သောတာဝန်ယူမှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်အောင်လက်ရှိဆဲသောပင်လယ်ဓားပြဂိမ်းအတွက်ကစားသမားဖြစ်လာ။
က Whois data တွေကို restore ပြန်မှကြွလာသည့်အခါခိုးကူး၏ဘာသာရပ်သူတို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒများတင်းကျပ်ဖို့အများကြီးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် tools တွေလိုအပ်ပါတယ်သောဥရောပ privacy ကိုစည်းမျဉ်း GDPR သို့ထပ်မံ delves ။ အမှန်တကယ်ပင်လယ်ဓားပြများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် site ကိုပိုင်ရှင်တွေကဆင်းခြေရာခံအတွက်အခက်အခဲကထပ်ပြောသည်သောဥရောပ privacy ကိုစည်းမျဉ်း GDPR, ICANN အမည်များနှင့်အများပြည်သူကြည့်ရှုရာမှ domain name ကိုပိုင်ရှင်များ၏အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကာကှယျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ကြီးကြပ်ခန္ဓာကိုယ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကတည်းက။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအုပ်စုများအပြည့်အဝ Whois အသေးစိတ်ကိုတခါပိုပြီးပွနျလညျထူထောငျစေခြင်းမေတ္တာရပ်ခံနှင့် ICANN ရဲ့အဆုံးကနေတိုးတက်မှုကို့ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအတူပြဿနာကိုနောက်ဆုံးမှာမဖြေရှင်းနိုင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဆက်ဆက်တိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဥပဒေပြုရှောက်သွားဖို့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ရေး, သို့မဟုတ်ဤကိစ္စအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်အကယ်စင်စစ် Third-party ကြားခံပိုမိုမိမိဆန္ဒအလျောက် Anti-ခိုးကူးသဘောတူညီချက်များပါလိမ့်မယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများအဆိုအရအောင်မြင်မှုအချို့အဆင့်ကိုပင်လယ်ဓားပြက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ကြော်ငြာကွန်ရက်များ၏ရလဒ်အဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ကို eBay, အမေဇုံနှင့်အလီဘာဘာနှင့်တူတောင်မှအချို့ဈေး, မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ရပ်တန့်ဖို့အခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်နှင့်အတူတူပင်ထိုကဲ့သို့သော PayPal က, ဗီဇာနှင့်မာစတာကတ်အဖြစ်ငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာအဘို့တတ်၏။ အခုတော့တိုးတက်မှု၏ဤအဆင့်တွင်ရှိနေသော်လည်းပြုနိုင်ကြောင်းကိုပိုရှိသေးရဲ့နှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနတက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုညီမျှအဆင့်ကိုဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဆန့်ကျင်ခိုးကူးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အခြားပုံစံများကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုနေဖြင့်ဤမျှလုပ်နိုင် ။
နေဆဲ domain name ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်တူသောပြောင်းပြန် proxy များပေါ်တိုးတက်မှုအာရုံ၏လိုအပ်ချက်အတွက်ဒေသများ၏အတော်ကြာ CloudFlare။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအုပ်စုများပင်လယ်ဓားပြက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှုအပြင်, hosting ကုမ္ပဏီများသည် "ထပ်တလဲလဲချိုးဖောက်" မူဝါဒများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့ရေးသားခဲ့သည်အခါစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများသည်ဤမူဝါဒသည်ပြဋ္ဌာန်းဘို့မိမိတို့လိုအပ်ပါကြောင်း, "အွန်လိုင်းဂေဟစနစ်အတွက် hosting provider များကိုများ၏အလယ်ပိုင်းအခန်းကဏ္ဍပေးသောကြောင့်များစွာသောသူတို့၏ hosting ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတားမြစ်ဝန်ဆောင်မှုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများရှင်းလင်းချိုးဖောက်မှု၌၎င်း, ၏ဗြောင်ကျကျချိုးဖောက်ရာတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ကြောင်းအကြောင်းကြားသည့်အခါအရေးယူဖို့ငြင်းဆန်ကြောင်းအဲဒီအချက်ဟာဖြစ်ပါသည် ဥပဒ။ "
ခိုးကူးမျှရယ်မောကိစ္စဖြစ်တယ်, မြင့်တက်အွန်လိုင်းခိုးကူးမှု၏ထက်ပိုပြောင်းလဲပုံစံနှင့်အတူ, ကာကွယ်ထားအကြောင်းအရာများ၏တရားမဝင်ဖြန့်ချိပါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကြောင်းထပ်မံတရားဝင်မှု၏အဆင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း, ထိုမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ပစ္စည်းဒါမှယုံကြည်ထားတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဝယ်ယူထားပြီးဘယ်မှာအမှတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည် ပစ္စည်းပင်ကသိရှိခြင်းမရှိဘဲတရားမဝင်ဖြန့်ချိ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေးလျက်ရှိသည်သူကိုပင်လူတို့အဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အွန်လိုင်းခိုးကူးမှု၏ပြဿနာရှိနေသော်လည်းအဆိုပါအုပ်စုများကိုအမေရိကန်အစိုးရသည်ဤခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်ကပိုထိရောက်တန်ပြန်အစီအမံပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုသူတို့၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ရှိနေဆဲနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမေရိကန်ဦးစီးဌာနကိုလည်းနှင့်အတူစတင်လေးပါးကိုအဓိကမျက်နှာစာပေါ်အကူအညီများပေးနိုငျကွောငျး မိမိဆန္ဒအလျောက်အစပျိုးများ၏အားပေးမှုကို။
အွန်လိုင်းပင်လယ်ဓားပြတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ပိုမိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန, ထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး: ifta-online.org/ifta-speaks-out/
Anti-ခိုးကူး anti-ပင်လယ်ဓားပြကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ညီလာခံ အကြောင်းအရာခိုးကူး တရားမျှတမှုဌာန DoJ IFTA Independet ရုပ်ရှင် IPTV MPAA ခိုးကူး အမေရိကန်အစိုးရ 2019-08-17
နောက်တစ်ခု: တွဲဖက်ပေး Audio ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး - နွေဦး 2015